Dhimashadiisa Ayuu Xaflad U Sameeyay! - Xogside
Home WARARKA CAALAMKA Dhimashadiisa Ayuu Xaflad U Sameeyay!
Mr.Satoru Anzaki waa maalqabeen caan ah oo dalka Japan u dhashay , waxaana uu martiqaad u sameeyay maalintii Isniinta dad gaadhaya 1000 qof, kuwaasi oo isugu jiray qaraabadiisa, saaxiibadii yaraantiisii, saaxiibada ganacsiga ee wakhtigan, shaqaalaha shirkadiisa iyo xubno kale.
Mr.Satoru Anzaki oo wakhtigan da’diisu gaadhay 80 waxa u hore u ahaa gudoomiyaha shirkadda Machinery Giant Komatsu, waxaana bishii October ee sanadkaa dhakhaatiirta caafimaadku u sheegeen baadhis ka dib inuu hayo xanuunka Kansarka oo kaga dhacay Beerka kaasi oo noloshiisa soo xidhaya wakhti aan fogayn
Wargeysyada dalkaasi ayuu ku qoray bishii Novemebr 20, inuu qaban doono xaflad uu ugu yeedhay sagootiska dunida iyo soo dhowaynta Aakhiro taasi oo uu kaga codsaday inay ka soo qaybgalaan. Odayga ayaa dadka uga mahad celiyay noloshii ay isla soo mareen iyo inuu ku faraxsan yahay imaatinkooda.
Ninkan oo gaadhiga dadka buka ama naafada ah lagu riixo xafladda lagu keenay ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay nolosha uu soo maray iyo waqtiga wanaagsan ee uu la soo qaatay saaxiibo badan oo goobta fadhiya. Dadka ayaa ku sheegay inay tani ahayd xafladii ugu horaysay ee ay ka soo qayb galaan iyadoo qofka sameeyay uu dadka sii maca salaamaynayo isagoo ku sii jeeda Aakhiro. Markii xafladu dhamaatay dadkii dhamaantoos way gacan qaadeen Odayga Mr.Satoru Anzaki iyagoo uga jeeda inay aduunayada ka macasaalmaynayaan. (Japantimes)
Previous articleFAAIIDOOYINKA MAHADNAQA
Next articleGolaha wakiillada Somaliland oo ansixiyay ajandaha kalfadhigii 1-aad ee golahaasi.